Qaramada Midoobey oo ku eedeysay ciidamada Eritrea inay boqolaal ruux ku dileen gobolka Tigteega | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Qaramada Midoobey oo ku eedeysay ciidamada Eritrea inay boqolaal ruux ku dileen...
Qaramada Midoobey oo ku eedeysay ciidamada Eritrea inay boqolaal ruux ku dileen gobolka Tigteega
Two Eritrean soldiers keep a watchful eye on the disputed Eritrean/Ethiopian border from a vantage point ot top of Eigar Mountain January 25. Tensions have increased since the two countries began reinforcing their troops along the front line. – RTXIPJW
Hay’adda Qaramada Midoobey u qaabilsan u doodista xaquuqda aadanaha ee Human Rights watch ayaa ku eedeysay ciidamada dalka Eritrea inay boqolaal ruux ku dileen gobolka Tigteega ee ku yaala waqooyiga dalka Itoobiya ayagoo caawinayay ciidamada Itoobiya ee dagaalka la galay maleeshiyada Tigreega dhamaadka sanadkii hore.
Warbixin hay’adda Human rights soo saartay waxay ku sheegtay in baaritaan ay sameysay ku ogaatay in ciidamada Eritrea ay xadgudubyo waa weyn ka geysteen gobolka Tigreega gaar ahaan magaalada taariikhiga ah ee Aksum la yiraahdo.
Hay’adaan waxay sheegtay in waraysiyo ay ka qaaday dad goob joogayaal ahaa ay sheegeen in ciidamada Eritrea ay si buuxda dagaalka uga weyn ahaayeen waxaana ay ka dagaalameen dhawr furimood ayagoo aan qarsooneyn.
Tirada dadka rayidka ah ee gacanta ciidamada Eritrea ku baxay waxay human rights ku sheegtay inay gaaraan illaa 200 oo ruux.
Horey sidaan oo kale hay’adda kale ee xaquuqda aadanaha u dooda ee amnesty international ayaa dawlada Eritrea ku eedeysay inay ciidamadeeda dhibaayooyin ka geysteen gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya.
Xukuumadaha Addis-Ababa iyo Asmara labada waa beeniyeen in ciidamo Eritrean gobolka Tigreega ka dagaalameen.
Previous articleBaadariga ugu sarreeya madhab-ka Catholic Pope Francis, oo kulan Ciraaq kula yeelanaya Hogamiyaha Shiicada Ciraaq
Next articleDibadbaxayaal Sinigaal ah oo dab qabad siiyay dhismooyin dawladeed
Maanta Waxaa adag Sida Midowga Afrika ugu guulaysan karo in si dhaqsi ah loogusoo laabto Miiska Wadahadalka, Sababtu Waxay Tahay Wixii ka dambeeyay...
Gobolka Minnesota iyo meelo kale oo lagu qabtay xuska sanad...
Banaabaxweyn oo looga soo horjeedo Farmaajo oo ka socda magaalada...